चितवनका कोरोना संक्रमित दिल्लीमा उपचार गराएर फर्केका दम्पती
२०७७ जेठ ९ शुक्रबार १०:५१:००
शुक्रबार बिहान कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये चितवनका दुई जना भारतमा गएर क्यान्सरको उपचार गराएर फर्केको पाइएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ६ केशरवागका ७४ वर्षीय पुरुष र उनकी ७३ वर्षीया श्रीमति दिल्लीको उक अस्पतालमा क्यान्सर रोगको उपचार गराएर फर्केको खुलेको छ । उनीहरुसँगै भारत गएका छोरामा भने कोरोना संक्रमण देखिएको छैन ।
भारतबाट फर्केपछि उहाँहरु घरमै सुरक्षित तरिकाले रहेको भन्ने जानकारी आएको भरतपुरको सरकारी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीले बताए । उनीहरुको अवस्था उमेर अनुसार सामान्य नै रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
शुक्रबार नै कोरोना पुष्टि भएका नवलपुरका विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–६ का ४५ वर्षीय पुरुषलाई पनि सोही अस्पतालमा ल्याएर राखिएको छ ।
चितवनमा अहिलेसम्म एक हजार २६३ जनाको स्वाब परीक्षण भएको छ । जसमध्ये ६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये चितवनका दुईजना उपचारपछि निको भएर घर फर्केका छन् । उपचारमा रहेका चारजना मध्ये दुईजना चितवन र दुई जना नवलपरासी पूर्वका हुन् । चैत्र २३ पछि स्वाबको पीसीआर परीक्षण भरतपुरमै हुने गरेको छ ।